Published: Thursday, 12 March 2015 14:26 | Print | Email
Iddoo Amantaa Dirree Sheek Huseen
Bakka, fageenya irratti argamu fi haala bu’uura misooma
• Iddoon Amantaa Dirree Sheek Huseen godina Baalee, Aanaa Gololcha, ganda Dirree keessatti finfinnee irra fageenya 657Km, Magaalaa Roobe irra 180km fagachuun lafa hektaara 3(sadii) irratti hambaa argamudha.Daandii aspaaltii Finfinnee hanga Roobeetti 430km kan qabu yemmu ta’u Roobee hanga Dirreetti immo daandii cirracha 180km kan qabudha.
Hawwatumma Dirree Sheek Huseen
Bakki Amanta kun seenaa qabeessa ta’u isaafi erga ijaaramanii waggoota dheera kan lakkofsisaniifi haali ijaarsa isaanii kan qalbii nama hawwatu “gamo” ykn “quba” kan qabu ta’u isaa.
Bakka aadaafi amaantaa ta’udhaan waggaatti yeroo lama bakka Amanttootni kumaatamma ta’an argamaniitti mudaamii bakka itti gaggeeffamudha.
Hawwata tuurizimii guddaa fi hambaa adunyaa ta’uf galmee yeroo uniskoo irratti galma’ee jira.
Hawwataa tuurizimii kan ta’an Bosona fi Bineensootii bosona naannoo isaatti argamu isaa
Tumsi lafaa hamba kun irratti argamu kan nama hawwatu ta’u isaa,
Tuuristoota amaantan waqabatee sirnoota adeemsisaman ilaalutti gamadan, akkasummas hambaalee amaanta, aadaa fi seenaa dawwataniif bakka gahumsa addaa (ideal place) dha.
Bataskaana Adaadii Maariyam
Bataskaanii Adaadii Maariyam Godina Kibba Lixaa Shawaa, Aanaa Qarsaa Maallimaa keessattii Finfinnee irra fageenya 67km, magaalaa godina (Waliso) irra 143km, magaalaa Aanaa (Lemman) irra 17km fagachuun kan argamudha.
Daandii cirrachaa hanga Bataskana kanatti geessu ni qaba.
Haawwatumma Adaadii Maariyam
Bataskaana dhakaa guddaa irra boocuun hojjeetamedha (Rock Hewin Church)
Meeshaalee durii mana Amantiichatu keessatti argama.
Manni Amantaa kun karaa seenan 10 fi foodaa xixxiqaa 14 qaba.
Bataskaana kanaan walqabatee sirni Amantaa ni gaggeeffama
Tuuristoota iddolee seenaa duriifi bakka Amantaa dawwatan kan harkiisudha.
Awaash Malka Qunxurree
*Iddoon Arkooloojiifi Paloo Antiropoloojii Awaash Malka Qunxurree Godina Kibba/L/Shawaa, Aanaa Qarsaa fi Maaliima, Magaalaa Awaash keessatti Finfinnee irra 50km, Magaalaa Awaash irra 2km fagachun kan argamudha.
ü Daandii asphaaltii Finfinnee irra kasee hanga magaala Awaashtti 50km kan qabu yemmu ta’u, magaala Awaash irra kasee hanga iddolaa kanatti daandii cirracha 2km kan qabud
Daandii asphaaltii Finfinnee irra kasee hanga magaala Awaashtti 50km kan qabu yemmu ta’u, magaala Awaash irra kasee hanga iddolaa kanatti daandii cirracha 2km kan qabudha.
Hawwatummaa Awaash Malka Qunxurree
Haftee lafeewwan dhala nama fi bineensoota
Meeshaalee dhalli nama itti fayyadama turan
Godhambaa hambaaleen kun namoota dawwataniif itti agarsiisamu
Bosona, Bineensoota bosona fi sinbirroowwan bakka kanatti argamu
*Iddoon arkooloojii fi paloantiropooloojii kun tuuristoota hambaalee Arkoolojii dawwatan, ummamaa ilaalun gamadaanii fi bashananu barbadaniif bakka mijatadha
Godahambaa Bunaa Coocee (Kattaa Mudugaa)
Godahambaan kun godina Jimma, Aanaa Gommaa, ganda Coocee Lammii keessatti, Finfinnee irra fageenyaa 413km, magaalaa Jimma irra 58km, magaalaa Aanaa irra 15km fagachuun kan argamu godahambaa argama Buna Kofii Araabiikaatii.
Daandii cirracha hanga godhambaa kanatti geessu ni qaba.
Iddoo kana bakka hawwata tuuristii gochuuf godhamba bakka kanatti ijaarudhaan misooma jira.
Haawwatummaa Godhambaa Bunaa Cooccee
Bakki kun bakka argama Buna kofii Arabiikaa ta’u isaa
Bakka seenaa fi Ummamaatii
Baankiin jiinii Bunaa Coocee iddoo kanatti argama
Finca’aan Buunbuu iddoo kanatti argama
Kasoo hixii (Misooma buna) bakka kanatti gaggeeffama
Godhamban jiinii Bunaa koofii Arabiikaa, meeshaalee fi fayyaa Aadaa itti dawwatan bakka kanatti argama.
Godhambaan Coocee qoratootta wa’ee jiinii Bunaa fi biqiltootta adda adda qorataniifi tuuristoota ummama ilaalu barbaadaniif bakka adda (ideal place) dha.
Riqichii Poorchugaal godina Shawaa Kabaa, Aanaa Giraar Jarsoo keessatti Finfinnee irraa fageenyaa 97km, magaalaa godina (Fiichee) irraa 5km, magaalaa Aanaa irraa 5km fagaachuun hamba argamudha.
Daandiin asphaaltii Finfinnee irra kasee Fiichee deemu hanga Riqichaa kanatti kan geessudha.
Haawwatumma Riqichaa Poorchugaal
Jarraa 16ffaa keessattii pooruchugaalootan riqichaa dhakaa fi buphaa irra ijaarameedha.
Bosoni ummama, ta’umsi lafaa zega–wodam, lagiinii guur, finca’aan Riqicha jalaattii argamu fi Ayyalaa (deep cliffs) bakka kanatti argaman midhagina hambaa kana dabalu.
Gadamii D/Libaanoos fi manneen Amaanta adda addaa hawwatoota biroo bakka kanattii argamaniidha.
Tuuristoota Ispoortii ayyalaa irra adeemsisan, haala ta’umsa lafaa fi ayyalaa (the topography of this site and the George) ilaalun gamadaniif bakka mijataadha.
Holqi Sof-umar Finfinnee irra 540km, magaalaa Roobee irraa 110km fagaachun godina Baalee, Aanaa Daawwee Qaachan ganda Sof-Umar keessatti holqa argamudha.
Daandii aspaaltii Finfinnee hanga Roobeettii 430km kan qabu yemmu ta’u, Roobee hanga ganda sof-umaritti dandii cirraacha 110km kan qabudha.
Tajaajila ibsaa kan hinqabne yemmu ta’u tajaajila mobaayila kan qabudha.
Hawwatumma Holqa Sof-Umar
Holqa gudda adunya Afriika keessatti argamu ta’u isaa
Holqi kun dheerna 15.6kms qabachu isaatiifi dheerna tuuristooti dawwacha dnada’an 1.2km qabachuu isaa
Holqa karaa itti seenan (entrances) 42 qabu fi lagiiwwan sagaleen isaanii nama hawwatu kan keessatti ya’aan ta’u isaa
Aluu Adii dhakaa (limestone) fi sinbirootii halkaanii keessatti argaman kan tuuristootta hawwatan ta’u isaa
Holqi kun bakka seenaa Amantiin Islamaa itti gaggeeffama taura ta’u isaa
Bakka fageenya irratti argamu fi haala bu’uura misooma
Holqi Aynaagee godina Harargee Lixaa keessatti Finfinnee irra fageenya 443km, magaalaa godina (Ciiroo) irra 123km, magaalaa Aanaa (O/Labuu) irra 10km, fagachuun holqa argamudha.
Daandii cirrachaa hanga holqa kanatti deemu kan qabudha.
Hawwatumma Holqa Aynaagee
Guddina isaatiin holqa sof-umaritti annun holqa sadarka lamaffa irratti argamudha.
Holqi kun karaa seenan lama fi kutaalee walxaxoo (complex network of passages with two enterances) kan qabudha.
Hawwata tuuristii kan ta’an holqoti hacaaree fi Baroo dhiyeenyan holqa kana biratti argamu.
Holqi kun qoratoota qorannoo adeemsisaniifi tuuristoota dawwannaf deemaniif mijaadha.
Holqi kun godina H/Lixaa, Aanaa Habroo, ganda ibsaa keessatti Finfinnee irra fageenya 424km, magaalaa godina (Ciiroo) irra 97km, magaalaa Aanaa (Galamiisoo) irraa 27km, fagaachuun kan argamudha.
Daandiin bayyeen gara holqa kanatti geessan ni jiru.
Hawwatumma Holqa Waraabeessaa
Bakka jireenya warabeessaa waan ta’ef maqaa isaa kana irra argate
Holqi kun bakka jireenya siinbiiroo halkanii (bats) fi sharariitii (spiders) tii.
Fakkiiwwan laga Uumuga, fakkiiwwan ganda ciiqqawa fi fakkiiwwan Coomaa hawwatootta tuuristii biro naannoo holqa kanatti argamniidha.
Holqi kun qoratootta qorannoo adeemsisaniifi tuuristootaf bakka mijaadha.
Bosona Ciillimoo Gajii
Bosoni kun godina Lixaa Shawaa keessattii finfinnee irra fageenya 82km, magaalaa godina (Amboo) irra 41km, magaalaa Aanaa (Giincii) irra 4km, fagachun lafaa hekitaara 6,000 uwwisun bosona ummama argamudha.
Dandiin cirraacha magaalaa Giinciitii kaasee hanga bosona kanatti geessu kan jiru yemmu ta’u bosona kana keessatti dandiin biroon hin babalanee.
Hawwatummaa Bosona Ciillimoo Gajii
Bosona ummamaafi namni tolche balaa qaba
Bosona ummamaa umuriin isaanii waggaa 400 olii ta’an of keessatti qabate jira.
Bineensoota Bosona kan akka Leencaa, Qeerrenasa, Bosonuu, Jaldeessaa, Weennii, Qamalee fi kkf of keessa qaba
Gosoota mukoolee kan akka harbuu, waddeessaa, Birbiirsa, Gaattiirra fi kkf of keessatti qabatee jira.
Mana keessumma keessatti keesumeessan (gues house) maatii motootta durii ijaarame bosona kana keessatti argaman
Mukaa guddaa wardiyaan irra ta’ee yeroo xaaliyaanii diinaa eguu (guardian out post) bosona kana keessattii argama.
Sibila ittiin bahan (Metal Ladder) bosona kana keessatti argama.
Bosoni kun tuuristoota bosona dawwatan, nannoo ilaalun bashaananiifi bosona keessaa bufaataniif (camping) kan mijatuudha.
Haroon Dandi haroowwan badaa Oromiyaa keessatti argaman keessa isaa tokko yemmu ta’u, godina Shawaa Lixaa keessatti Finfinnee irra fageenya 108km, magaalaa godina (Amboo) irra 60km, magaalaa Aanaa ( ) irra 31 km fagachun kan argamudha.
Daandii konkolaataa ni qaba
Hawwatummaa Haroo Daandii
Lafaa ol ka’an marfamee argama
Bishaan qulqulu bifa samii fakkatu qaba, akkasumas waan lakkofsa 8(sadeet) fakkatuf bareedina addaa qaba.
Lubbuu qabeeyyii bishaan keessaa jiratan kan akka qurxummii fi kkf of keessa qaba.
Haroon kun tuuristootta Ispoortii bishaanii, guluufii fardaa, kaapiingii, ummamaa ilaaluttii gamadaniifi tajaajila fardaa barbadaniif bakka adda (ideal site) dha.
Haroon Wancii godina Kibba Lixaa Shawaa, Aanaa Wancii keessatti, Finfinnee irra fageenya 152km, magaalaa godina (Waliso) irra 38km, magaalaa Aanaa irra 27km fagaachuun bakka gahumsa tuuristii argamudha.
Daandiin cirraachaa hanga haroo kanattii geessu kan jiru yemmu ta’u yeroo ammaa daandii asphaaltii hojeechuuf mootummaan karooraa keessatti qabatee jira.
Hawwatumma Haroo wancii
Bishaan qulqulufi bareedina addaa qabu haroo geengoo (Circlar slope) keessatti argamu, isaafi bosona ummama magarsiisan (alphine vegetation) marifame argamu isaa,
Mandaroota iddo olka’aa qarqara bishaanii irratti argaman (Village on peninsula), Batas kana durii ciituu lafaa irratti argamu (the small islan with monastery), mannenifi magariisaa qarqara bishaanii irratti argamu (the houses and gardens on the lake side) haroo kana bakka addaa dawwatamu qabu isaa tasiisu.
Gosa Mukolee gurguddoo 15 bosona ummama, gosoota sinbiroo adda addaa (many aquatic and terrestrial bird species), Bineensoota bosona kan akka jaldeessa (colobus monkey), Fincaa’aa, bishaan albuudaa fi kkf haawwatumma haroo kana dabalu.
Haroon kun tuuristoota Ispoortii bishaanii, Doonii fi fardooleen deemufi bashananu barbadaniifi bosona dawwataniif, bishaan ho’aa ummamattii fayyadamu barbadaniifi bashanana Iko-tuurizimiin walqabatee barbadaniif bakka mijataadha.
Paarkii Dhaatii Walal
Paarkiin Dhaatii Walal godina Qellem Wallaggaa, Aanaa Gaawoo Qebbee, ganda koyyaan keessatti, Finfinneerraa fageenya 648km, magaalaa godina (D/Dolloo) irra 128km, magaalaa Aanaa (Qeebbee) irraa 40km fagaachuun balina laa hekitaara 103,500 ykn 1035 km2 uwwisun paarkii uumamaa argamudha.
Daandii bonaa konkolaataa galchu qaba.
Dhabbaatii Bosonafii Bineensoota Bosona Oromiyaa dhaabilee tajaajila tuuiristii kennan kan akka loojii, Risoortii fi kkf iddoo kanatti ijaaruuf qophii irra jira.
Haawwatummaa Paarkii Dhaatii Walal
Paarkii kana keessaa heddumina sanyii biqiloota fi Lubuu qabeeyii kan bineensoota gurguddoo kan akka Gafaarsaa, Roobii, Borofaa, Qorkee, Karkaroo, Booyyee fi Sanyii Sinbiroota of keessatti qabateetu argama.
Baayinni tuuta Gafaarsa fi Roobii Parkii kana keessatti argamu addaa fi kan nama hawwatudha.
Adda kan ta’ee heddumina lubuu qabeeyii, sinbirroota akkasumas Ikoosisiteempii paarkii qabudha.
Bineensooti bosona kan akka Arbaa, Leencaa fi kkf Paarkii kana keessatti argamu.
Akka biyyaatti gosoota bineensoota gurguddoo ilaaluf paarkiin kun iddoo addaa (best place) dha.
Dawwattoota bineensoota bosona, gosa sinbirrota garaagaraa fi ummama ilaaalun bashannanaafi iddoon kun bakka addaa (ideal place) dha.
Paarkiin Booranaa Finfinneerraa 570km fagaachuun godina Booranaa keessatti lafaa hekitaara 25,000km2 uuwwisuun paarkiin uummama argamudha.
Paarkiin kun daandii Aspaaltii fi Cirracha qaba
Haali bu’uura misooma kan biroon hin ibsamne
Haawwatumma Paarkii Booranaa
Paarkiin kun paarkii hedummina lubuu qabeeyyi qabudha.
Bineensootii bosona kan akka Reetii Urufaa, Koorkee, Bosonu, Karkaaroo fi kkf Ciinaa karaa Meegaa dhaqu irratti ni mulatu.
Bineensootii Bosona gurguddoon kan akka Giraafii, Arbaafi Leencaa Paarkii kana keessatti argamu.
Gosi sinbiroota bayyeeniis paarkii kana keessatti argamu
Bakka hawwata tuuristii kan akka Booqee soogiddaa, Bosona areeroo, Bosona magaadaa Bishaan ho’aa Waallamee fi Bobbaca saphee hawwata kana kan deggeraniidha.
Tuuristoota bineensoota bosona, sinbirroota fi alatiiwwan ilaalun bashannanaiif iddoo addaa (ideal place) dha.